avylavitra · Jona 2011 · Global Voices teny Malagasy
avylavitra · Jona, 2011
Lahatsoratra farany an'i avylavitra tamin'ny Jona, 2011
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana16 Jona 2011
Mpandika asongadina: Fabienne Der Hagopian
Azia Afovoany sy Kaokazy15 Jona 2011
Mpandika an-tsitrapo ho an'ny Global Voices i Fabienne. Avy aminà fianakaviana Armeniana, nandika betsaka ho amin'ny teny Frantsay izy tamin'ireo lahatsoratra momba an'i Kaokazy, nefa koa mahaliana azy ny mikasika izao tontolo izao amin'ny lafiny rehetra. Miverina mijery ny niainany ny maha-mpandika an-tsitrapo azy eto amin'ny Global Voices i Fabienne
Amerika Latina15 Jona 2011
Olan'ny filaminam-bahoaka ao Kolombia ny halatra finday sy ny famarotana azy ireny eny amin'ny varo-maizina avy eo, ka nahatonga ny governemanta hanapa-kevitra hiatrika azy io tamin'ity taona ity. Saingy araka ny efa nampoizina dia niteraka fanehoan-kevitra samihafa ilay fepetra.
Eoropa Andrefana14 Jona 2011
Ireo fanentanana nanomboka tamin'ny 15 May tao Espana dia nivadika niandàlana ho famoriam-bahoaka tao an-toerana, fivorivoriana ary karazana fandraisan'andraikitra maro samihafa nanerana ny firenena. Saingy mbola avo dia avo ny maripàna eny an-dalambe eny. Tamin'ny 11 Jona, tao Madrid renivohitra, niafara tamin'ny firotsahana an-tsehatry ny polisy namely ireo mpanao hetsi-panoherana...
Afrika Mainty12 Jona 2011
Azia Afovoany sy Kaokazy07 Jona 2011
Tsy ny tale irery no tonga tao an-tanàna ho an'ilay hetsika, fa hatramin'ireo mpilalao sarimihetsika toa an'i Andy Garcia, Dean Cain sy ny hafa. Na izany aza, ny olona nasaina isan'ny tena nanana ny toerany indrindra dia ilay mpilalao sarimihetsika avy any Hollywood, Sharon Stone.
Azia Atsinanana05 Jona 2011
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana05 Jona 2011
Samir Feriani, mpiasam-panjakana ambony tao amin'ny Ministeran'ny Atitany, dia nosamborin'ny polisy tsy an-kitsitsy mihitsy no sady nentina tany amin'ny toby miaramila iray tao Tunis renivohitra ny 29 May teo. Andro maro talohan'io, namoaka taratasy roa tao amin'ny gazetiboky “Al-Khabeer” ho an'ny vahoaka Toniziana, ka tao anatin'izany no nanakianany ny politika...
Afrika Mainty05 Jona 2011